Nhasi tinokurudzira mabhuku matatu kuti udanane ne | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Type, Mabhuku, Literature, Novela
Nhasi ndamuka nyoro ... Pamazuva iwayo paunoda "mbama yerudo" inoita kuti umuke uye inokuzadza netariro. Rudo ndirwo runogamuchirwa uye runodiwa manzwiro nevose, kana handizvo? Uye isu nguva dzose hatisi kungozvitsvaga chete - tinotarisira muhupenyu, asi tinodawo kuona nyaya dzechokwadi dzerudo pachiratidziro chikuru, mumaterevhizheni, munziyo, uyezve, mumabhuku.
Zvakanaka, kutora mukana wekuti uri Mugovera, anova mazuva ekuzorora, kunakidzwa nekuita zvese zvisingatipe nguva mukati mevhiki rese, Ndiri kukukurudzira iwe mabhuku matatu kuti udanane ne ... Ivo ndevamwe vevaunoverenga uye nekungopedza iwe unofara uye kufungidzira kwechimwe chinhu chakafanana kana chakafanana kuti chiitike kwauri. Ndeupi waungasarudza pakutanga? Ndatoverengera ese matatu uyezve ndinokupa mutongo wangu muchimiro chemapoinzi kune mumwe nemumwe wavo. Asi rangarira: iko kuongorora pachako, haufanire kubvumirana.
1 Erich Segal's "Nyaya Yerudo"
2 "Pasi Penyeredzi Imwe" naJohn Green
3 "Wuthering Heights" naEmily Brontë
Erich Segal's "Nyaya Yerudo"
Ini ndinokurudzira iri bhuku nekuda kwezvikonzero zvitatu:
Chekutanga pane zvese ichocho nhasi chete, musi waJune 16 asi kubva mugore ra1937, munyori wayo Erich Segal akazvarwa. Ndeipi nzira iri nani yekukudza basa rake pane kuiverenga?
Chechipiri ndechekuti ibhuku rakapfupika kudaro (ndinofunga ndinorangarira kuti riri pamapeji 170) inoverenga zvakakwana pavhiki. Zvinokuita iwe kupfupika! Iwe ucharasikirwa kuti hazvirambe ...
Uye yechitatu neyekupedzisira, iyo mukuwedzera pakuve inoverengeka yakanaka kwazvo, anewo bhaisikopo rake rakavakirwa pabhuku iyo zvakare inokurudzirwa zvikuru.
Oliver mudzidzi anoda zvemitambo weHarvard kubva kumhuri yakapfuma. Jennifer, anonzwika uye anoseka mudzidzi wemimhanzi anoshanda semaraibhurari. Sezviri pachena havana chavakafanana, asi ...
Oliver naJenny ndivo protagonists yeimwe yeinonyanya kuzivikanwa nyaya dzerudo dzenguva dzese. Iyo nyaya inoverengwa nevanhu vakuru vazhinji nemufaro, uye izvo zvinoramba zvichikunda pamusoro pezvizvarwa zvitsva zvevaverengi.
Kupfuurisa 21 mamirioni emakopi...
Kirasi yangu kwaari ndeye 4/5 mapoinzi.
"Pasi Penyeredzi Imwe" naJohn Green
Rimwe bhuku randakaverenga zvakanyanya sekuona kwandakaita firimu ravakaita nezvake ... Kana iwe usiri kuda kuchema sekeke, handikupi zano, chaizvo ... Asi ini ndinokuudzawo kuti ungarasikirwa ne bhuku idzva, nerudo rwevechidiki uye rwevechidiki yeavo kana vasvika vanoita sevanoparadza zvese.
Iyo diary The New York Times akadana ino novel se "Musanganiswa wekunyungudika, kutapira, uzivi uye nyasha" kunze kwaizvozvo "Tevera nzira yedambudziko rechokwadi".
Hazel naGus vangade kuva nehupenyu hwakajairika. Vamwe vangati ivo havana kuzvarwa vaine nyeredzi, kuti nyika yavo haina kurongeka. Hazel naGus vangori vechidiki, asi kana gomarara ravanotambura vese rakavadzidzisa chero chinhu, ndechekuti hapana nguva yekuzvidemba, nekuti, sekuda kana kwete, kuchingova nanhasi uye ikozvino. Uye nekudaro, nechinangwa chekuita kuti chishuwo chikuru chaHazel chiitike - kusangana nemunyori waanoda - vachayambuka Atlantic pamwe chete kuti vararame nguva inopesana newachi, seyakatyisa sezvo ichirwadza. Kwamunoenda: Amsterdam, iyo nzvimbo inogara inoshamisa uye inonyangadza munyori anogara, iye ega munhu anogona kugona kuvabatsira kuronga zvidimbu zvepikicha hombe yavari chikamu chavo.
Nhoroondo inoverengwa inokurudzirwa kwemakore gumi nemana zvichikwira.
Chikamu changu pabhuku rino ndi4 / 5.
"Wuthering Heights" naEmily Brontë
Yese yakasarudzika yemabhuku anofanirwa kuve anofanirwa-kuverengerwa. Yakasiyana kwazvo nemamwe mabhuku maviri akakurudzirwa pamusoro, nekuda kweayo akaomesesa, ekare, ekare echinyakare kudanana
Iko kutaurwa kwenyaya inoshamisa uye ine njodzi. Inotanga nekuuya kwemukomana Heathcliff pamba peEarnshaw, iyo inounzwa nababa vemhuri kubva kuLiverpool. Hatizive kuti chisikwa ichi chakabvepi, uyo achakurumidza kukanganisa hupenyu hwakanyarara hwemhuri yake yekurera pamwe neiya yevavakidzani vake, vanaLinton. Nyaya yerudo nekutsiva, yeruvengo neupengo, yehupenyu nerufu. Catherine Earnshaw naHeathcliff vanokudziridza hukama hwekuvimbana mukati mehupenyu hwavo hwese, kubva paucheche kusvika parufu.
Kana iwe uchida kuziva kuti nyaya inoitika sei uye kuti inoenderera mberi sei, uchafanira kungovhura bhuku racho wega ...
Chikamu changu chebhuku rino ndeche5 / 5 mapoinzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku matatu kudanana
Matipi mashanu ekutsvaga nguva yekunyora